Dab ka Kacay Kaymo ku Yaala Maraykanka Oo Laga Dayrinayo. – Heemaal News Network
Lamaane dhawaan u dabaaldagay 75 guuradii arooskooda ayaa ka mid ahaa 21 ruux oo ku dhintay dabkii ugu khasaaraha badnaa ee ka dhaca gobolka California ee dalka Maraykanka. waxaa la la’yahay illaa 300 qof meel ay jaan iyo cirib dhigeen.
Charles Rippey oo 100 jir ahaa iyo xaaskiisa Sara oo 98 jir ahayd ayaa ka mid ahaa dadkii ku dhintay 22kii dab ee baabi’iyay 115,000 ee aykar iyo 3,500 ee guri.
Deegaanka Sonoma oo ka mid ah goobaha uu dabku dhibka baaxadda leh u gaystay ayay masuuliyiintiisu sheegeen in wali la la’yahay 380 ruux.
Taliyaha booliiska Sonoma Robert Giordano ayaa mar hore sheegay in la la’yahay 670 ruux, wuxuuna intaas raaciyay in xaaladdu ay si dhakhso ah isu badbadalayso.
Wuxuu sheegay in 150 ruux la ogaaday meesha ay ku sugan yihiin uuna filayo in qaar ka mid ah dadkaas aan magacyadooda wali laga saarin diiwaanka dadka la’layahay
Sawir muujinaya si uu markii hore ahaa huteelka Hilton ee magaalada Santa Rosa iyo sida uu dabku u galay markii dambe
Xildhibaan Axmed Diiriye Nacnac Oo Bustihiisa Ka Lalaabtay Xisbiga Kulmiye , Kuna Sii Jeeda Xisbiga Wadani
Maraykanka Oo ku Han-jabay Inuu Buuga Madaw ku Qoran-doono Dalalka kasoo Horjeeda Go’aankii Trump Ee Qudus.
December 20, 2017 Caalamka
Dowladda Maraykanka ayaa sheegtay in ay diiwaangashan doonto shaqsiyaadka iyo dalalka kasoo horjeedsada go’aanka ay ka gaartay arrimaha Qudus. Hadalkan ayaa waxa uu soo baxay kadib codka la filayo in go’aankaas lagu dhaleeceeyo kadib kulan […]
Mareykanka Oo ku Eedeeyay Ruushka inuu Hubeeyo Kooxda Taliban.
Mareykanka ayaa Ruushka ku eedeeyay inay hubaynayaan kooxda Taliban sida uu sheegay madaxa ciidamada Mareykanka ee ku sugan Afqaanistan. Gen John Nicholson ayaa sheegay in uu arkay howlo xasillooni daro ah oo uu Ruushku ka […]
November 6, 2017 Soomaaliya
Mid ka mid ah ragga ugu sarreeya maamulka madaxweyne Donald Trump ayaa xiriir ganacsi la leh dad Ruush ah oo xulafo la ah madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin kuwaas oo Maraykanku uu cunaqabatayn saaray, sida lagu […]